Guyyaa haraa, deparmantiin mana fayaa Iowa namni haarawa covid-19 due 43 tauu himan, nama 2 Woodbury | KWIT
bulchiitu Iowa Kim Reynolds seera talaali corona virus gadi dhaabuf kontiraata Microsoft akka walii hin gallee himan.
Oduu conference guyyaa har’aa Reynolds akka gabaastetii filannoo Microsoft booda, erga qorattee booda bulchiinsa amma jiru irrati waldhabdii baaye uuma kan jedhu sodaatani jiru.
Reynolds akkka jetteti waa’e talaali kan beeku fedhaniifi beelama online kan qabachuu hin dandeenne jiraattoni Iowa akka fayyadamoo ta’an kan akka seera 2-1-1 ta’an jabeesudhaf hojattaa akka jirani himanii jiran. Beellama qabachuu warra hin dandeene akkasumas umriin isaani kan deeme akka naanna agency bilbilan himan.
Kara naanicha talaalin wayta dhufu, bor seaati booda Siouxland district health department beellama talaali corona virus kan harbaa dhuftu jalqabuuf nibanama. Jiraattoni online yookin bilbiluun galamahu ni dandau seaati 3 p.m irraa jalqabe lakkoofsis 712 234 3922 irrati.